iPad ahịhịa nwere ike - Olee otú naghachi ehichapụ faịlụ na iPad e
Ọ bụ a maara nke ọma eziokwu na iPad bụ otu n'ime ndị na Ngwa na-eji n'ụwa nile site ọtụtụ nde ndị ọrụ, ya mere ọ bụkwa ihe biakwa obibia eziokwu na nhichapụ nke faịlụ na ndị ọzọ dị mkpa onye akwụkwọ bụ a na-eme mgbe ọ na-abịa na ngwaọrụ a na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ndị mmadụ na-mgbe na-achọ ezi ngwa na-agaghị nanị na-ahụ na nke furu efu data na-Ewepụtara ma ọ na-eme ka n'aka na data a na-echebe ma nọrọ ná nchebe na ọ na-Ewepụtara ke hour nke mkpa. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na nke a nkuzi e dere na-eme ka onye ọrụ maara nke ụfọdụ eziokwu mgbe ọ na-abịa data nhichapụ. Eziokwu ndị a dị nnọọ ọjọọ na ọdịdị na nke ikpeazụ halves nke nkuzi ga-emekwa ka n'aka na ihe ọmụma banyere nke a nke a pụta ìhè na nke kacha mma o kwere omume n'ụzọ. N'ihi na ụfọdụ ndị ọrụ eziokwu ndị a pụrụ ịbụ ịtụnanya ma maka otu ihe ahụ ọ na-gwara iji jide n'aka na ngwaahịa na-atụ aro omume bụ mgbe a ga-eji site novice ọrụ na-enweghị ọkachamara enyemaka.
Bụ n'ebe ọ bụla ahịhịa nwere ike ngwa n'ihi na iPad?
Iji na-ekwu n'ihi na n'aka ọ dị mkpa na iPad nwere ngwa n'ihi na mweghachi nke data ma ọ bụ ọ dịkarịa ala otu dị otú ahụ ngwa gaara e iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe functionalities na-etinyere mgbe ọ na-abịa data ọnwụ na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ọ dị mwute ikwu dịghị ngwa mgbe ọ bụla e mepụtara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na nke a. Ọ dịghị iDevice mgbe ọ bụla e ẹkenam na bụla dị otú ahụ ngwa otú wuru na atụmatụ ga-eme ka n'aka na data mgbe Ewepụtara na ọ bụkwa n'ihi na eziokwu na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà ọrụ na-eji weghachite data na nke kacha mma o kwere omume n'ụzọ. Ọ na-na-kwuru na a onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na ngwa nke usoro ihe omume kwesịrị ire ụtọ na na akara na ihe ndị a chọrọ nke ọrụ. Ndị a bụ naanị ihe ga-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results enweghị ọtụtụ hassle.
Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na ihe dị mkpa e ehichapụ?
E nwere ọtụtụ ụzọ iji hụ na kasị mma na ndị ọkaibe teknụzụ na-etinyere iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na Wondershare Dr. Fone na-eji na-eme ka n'aka na data si iPad na-Ewepụtara ọ bụrụ na ihe e mere accidently. Wondershare Dr. Fone ka wuru na ọkaibe atụmatụ nke-eme ka ọ a zuru okè mgbake ngwá ọrụ na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na mma atụmatụ na-eji ụzọ kasị mma. Ọ bụ-ahụ kwuru na mmepe nke usoro ihe omume jide n'aka na mmelite nke a dị oke egwu tech mpempe na-ulo oru enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge na onye ọrụ na-nọ maara nke ọma eziokwu na na ọnụ ọgụgụ nke ojiji nke usoro ihe omume dị ka mma. The ukara Wondershare website na-atụmatụ ngwaahịa a na ndị ọzọ na maka otu ihe ahụ ọ na-gwara ka ọ bụla onye ọrụ iji nweta ya enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge nke mere na atụmatụ nwere ike na-enwe na nke kacha mma n'ụzọ.
Naghachi-ehichapụ faịlụ na iPad na enyemaka nke Wondershare Dr. ekwentị
Ojiji nke Wondershare Dr. ekwentị bụ jụụ mfe na usoro a ga-kwuru ebe a nakwa na e agbakwunyere na screenshots iji jide n'aka na onye ọrụ mgbe odụk ọ bụla ụdị mbipụta mgbe ọ na-abịa omume na kwukwara atụmatụ iji. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na nzọụkwụ ebe a na-etinyere tupu ọ bụla ọhụrụ ngwa e arụnyere na iPad na ọ bụ ihe niile n'ihi na eziokwu na ọ bụrụ na nke ọ bụla ọhụrụ ngwa echichi ochie data na-overwritten nyochawa na maka otu ihe ahụ ọ bụghị recoverable. Iji zere ọ bụla dị otú ụdị ọnwụ ma ọ bụ zere ihe ọ bụla misadventure ọ na-gwara iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe atụmatụ nke usoro ihe omume na-eji dị ka kwa ndu na e kọwara dị ka n'okpuru:
1. The URL http://www.wondershare.com/drfone-iphone-data-recovery.html bụ ike tinye n'ọrụ na meghere iji jide n'aka na ngwa na-ebudatara, arụnyere na-agba ọsọ mgbe ọ na-anọwo na-emeghe:
2. The Malite iṅomi bụ mgbe ahụ ka ike tinye n'ọrụ o jide n'aka na a nwere ọgụgụ isi omume-enyocha kwa ngwaọrụ ka a dum na welite arụpụta ihe kasị mma na mmekọrita data mgbake:
3. The oru ọmụma banyere faịlụ a na-ahụ na-anya ma ọ bụrụ na onye ọrụ chọrọ:
4. The lekwasịrị ọnọdụ bụ mgbe ahụ na-kpọmkwem na-eme ka n'aka na natara data a na-echekwa dị ka kwa mkpa na-achọ n'aka onye ọrụ na onye na chọrọ ọnọdụ dị ka nke ọma:
Olee otú iji zere data ọnwụ na iPad bụrụ na mkpa faịlụ a ehichapụ?
N'okpuru ebe e kwuru ihe ụfọdụ ndị Atụmatụ na ga-agbasoriri na nke a iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi bụrụ na nke data nhichapụ:
1. Ọ dịghị ọhụrụ ngwa ga-arụnyere dị ka ọ ga overwrite data eme mgbake nke ochie data a anuri ọrụ jupụtara hassle.
2. Onye ọrụ kwesịrị iji ihe kasị mma mgbake omume na bụ dị na ahịa na-eme ka n'aka na data na-Ewepụtara enweghị ihe ọ bụla ọnwụ na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na omume na-eji na akara na ntuziaka nke akwụkwọ ntuziaka na e dere na na.
Olee otú mmekọrịta Music ka iPad na Enweghị Loss
Olee otú iji weghachi iPad Obere si iPad / iPhone / iTunes ndabere
> Resource> iPad> iPad ahịhịa nwere ike - Olee otú naghachi ehichapụ faịlụ na iPad